Tafatafa Tamin’i Makaila Nguebla, Tsadiana Mpanao Gazety, voaroaka Avy Ao Senegal Ho Any Ginea · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2013 9:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, English, Français
Noroahan'ireo tompon'andraikitra senegale ho any Ginea ny 8 may 2013 teo ny mpanao gazety Makaila Nguebla.
TeamObservers nanoratra tao amin'ny France24 hoe:
Iray amin'ireo mpitrandra-baovaonay, Makaila Nguebla, Tsadiana mpanohitra miaina an-tsesitany any Dakar, no voarokan'ireo tompon'andraikitra senegale ny alin'ny 7 hifoha ny 8 may. Mpanohitra mahery fo ny filoha Tsadiana Idriss Déby, nialokaloka tany Dakar i Makaila nanomboka tamin'ny 2005. Na teo aza ny fangatahana maro samihafa, tsy nomen'ireo tompon'andraikitra azy mihintsy ny taratasy mikasika ny maha-mpialokaloka azy.
Ao amin'ity lahatsary eto ambany ity dia mitantara i Makaila NGuebla fa nifidy an'i Senegal taorian'ny nisamborana azy tany Tonizia (izay vao avy namitàny ny fianarany). Vokatry ny tsindry iraisam-pirenena dia tsy afaka nandroaka azy ho any Tchad ny 2005 ireo tompon'andraikitra toniziana tamin'izany fotoana.
Tamin'ny antso an-tariby, avy any Konakry, mitantara izy:
Nanomboka ny fahasahiranako ny marainan'ny nandehanan'ny minisitry ny Fitsarana tsadiana Jean-Bernard Padaré ho any Senegal izay nihaonany tamin'ireo tompon'andraikitra mikasika ny fitsarana ny filoha tsadiana teo aloha Hissène Habré. Nihaona tamin'ny minisitry ny fitsarana sy lehibem-panjakana senegale i Jean-Bernard Padaré, irery tsy nisy olom-panjakana tsadiana hafa. Nandao an'i Dakar izy ny alahady 5 may. Ny alatsinainy 6 may, nampiantso ahy ny talata 7 may amin'ny 3ora tolakandro ny Sampana ny Fiarovana ny Zaratany senegale (DST). Namaly ny antso aho, niaraka tamin'ny Amnesty International ao Senegal izay nangatahana hiàla ny toerana. Izaho irery izany sisa no nijanona niaraka tamindry zareo.
Nampidiriny tao anaty fiaramanidina ho any Konakry aho ny alin'ny talata hifoha alarobia. “Reny” iray nahita ahy nitomany nandritra ny dia no nandray ahy ho eo ambany elany: nanampy ahy izy tamin'ny fikarakarana ny antotan-taratasy rehetra teny amin'ny mpitandro ny filaminana raha vao tonga tany Konakry – tsy nampilaza ireo Gineana mpiara-miasa aminy ireo tompon'andraikitra Senegale. Monina ao amin'io ramatoa io aho ankehitriny ary miaina ny zava-misy toy ny Gineana rehetra: fahatapahan-jiro ny hariva ary fidirana aterineto aminà clé iray izay zara raha mandeha [ndlr: tsy maintsy nanapaka ny fifandraisana tamin'ny skype ny Global Voices, ratsy be ny fifandraisana amin'ny aterineto. Notohizana tamin'ny alalan'ny antso antariby izy.
Global Voices : Ahoana no hanazavanao fa i Senegal, izay tsy nandroaka mpanohitra ara-politika, no hilefitra amin'izay toa tsindrin'ny tompon'andraikitra tsadiana?
Makaila NGuebla : Nanome fahefana vaovao an'i Idriss Deby ny fifandirana tany Mali, anisan'izany ny hoa satria ny tafika tsadiana irery no mahafantatra tsara ny tanàna ary hany tafika afrikana tokana afaka manohana tsara ny tafika frantsay. Fanampin'izany, noho ny volan-tsolika tsadiana, afaka nandray anjara tamin'ny famatsiana ara-bola ny fampielezan-kevitr'i Macky Sall tao Senegaly i Idriss Deby. Tao anatin'ny fifandresen-dahatra mikasika ny antotan-taratasin'i Hissène Habré, nangatahana ny hanolorana ahy amin'ireo tompon'andraikitra tsadiana.
Global Voices : Mahatsiaro ho voaaro ve ianao any Ginea?
Makaila NGuebla : Tsia. Nihaona tamin'ny Minisitry ny zon'olombelona aty Ginea aho izay nilaza tamiko fa tsy afaka miantoka ny fiarovana ahy izy amin'izao toe-draharaha misy eto amin'ny fireneny izao. Nandritra ny taona maro, nandalo fotoan-tsarotra i Ginea. Tsy tontosa ireo fifidianana solombavam-bahoaka taorian'ireo fifidianana filoham-pirenena farany. Ary nisy fihetsiketsehan'ireo mpanohitra nandritra ny herinandro maromaro.
Global Voices : Voalazanao etsy ambony fa monina ao amin'io ramatoa io ianao izay niaro anao hatrany anaty fiaramanidina. Fa aiza ho aiza ny toerana misy anao ara-panjakana eo anatrehan'ny manampahefana gineana?
Makaila NGuebla : Io maraina io [asabotsy 11 may], niaraka tamin'ireo mpikambana avy amin'ny Filankevitra Nasionalin'ireo Fikambanan'ny Vondrom-piarahamonina Sivily Gineana sy ny HCR, afaka nampiditra ny fangatahana voalohany mikasika ny maha-mpitsoa-ponenana ahy aho.
Ny tontolon'ny bilaogy senegaley ihany koa dia nihetsika raha tsy hilaza afa-tsy ny Twitter eo ambany tenifototra #FreeMakaila ary mitaky ny fiverenany any Senegal.
Cheikh Fall, avy amin'ny Sunu2012 manazava: “Tsy hoe fotsiny fanaovana tsinontsinona ireo zon'i Makaila Nguebla izay tsy manana na inona na inona mamatotra azy any Ginea ary nanangana ny fiaianany taty Senegal nandritra ny 8 taona, fa koa fanaovana tsinontsinona ny fahafahan'ny vahoaka Senegaley rehetra maneho hevitra an-kalalahana: raha manomboka manolotra mpanohitra amin'ireo fitondràna mpanao jadona ny manampahefana, dia tsy hisalasala ny hampihatra izany koa amin'ireo mpanohitra ao aminy, vantany vao mahita hirika.”
Fanavaozana ny 12 may 2013, tamin'ny 2ora tolakandro:
Vao avy naneho hevitra ny governemanta senegaley io marainan'ny alahady io tamin'ny alàlan'ny mpitondra teniny. Tsy niandrinadry ny valintenin'ireo afrikana mpandefa bitsika.
Cheikh Fall @cypher007 manamarika:
@cypher007: “Toe-draharaha tsy ara-dalàna, Fisiana ekena ametrahana fepetra…” Hatramin'ny oviana no nisy ny karazana fitsipika toy izany any #Senegal?
@wirr2011 kosa tanàty bitsika 9 dia nilaza fa fany ninian'ny governemanta senegaley ny nitazonana an'i Makaïla Nguebla tsy ara-dalàna nandritra ny valo taona mba hahafahana mampihatra teritery taminy.
Namaly bitsika iray nalefan'i @wirr2011 i Yacouba Ouédraogo @Bambyam :
@Bambyan: Fony manome fialofana an'i Habré ary niaraka tamin'ny tànana nihosin-drà, azo tohizina hatrany ny “fandeferana” ny mpisolelaka.
Maro tamin'ireo mpibitsika no nanamarika mihintsy fa miandraikitra amin'eso ny toerana maha minisitry ny fahaiza-mitantana ilay mpitondra tenin'ny governemanta ary io mpanao gazety tranainy io izay nanaovana fitondra tsy ara-drariny nandritra ny fitondran'i Wade no indro nidina ambany “hiaro ireo fomba fanao mahamenatra”.
6 ora izayMediam-bahoaka